फिर्ता नीति - loveofqueen
वारंटी र रिटर्न
Loveofqueen मा, ग्राहक सन्तुष्टि सधैं हाम्रो शीर्ष प्राथमिकता हो।
हाम्रो समर्पित गुणस्तर नियन्त्रण र गुणस्तर आश्वासन टोलीहरूले तपाईको वस्तुहरू ढुवानीको अघि निरीक्षण गर्नेछ। हाम्रो उत्पादन को गुणवत्ता को गारंटी छ। तथापि, तपाईंलाई खरीद गर्न अघि आफ्नो आकार सावधानीपूर्वक र सही रूपमा जाँच गर्न आवश्यक छ। कृपया उत्पाद पृष्ठमा आकार चार्टहरू दयालु गर्नुहोस्।
यदि तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको वस्तुहरूसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने, हामी सजिलैसँग एक आदान प्रदान वा तपाईंको लागि फिर्ती व्यवस्था गर्न सक्छौं। हामी यहाँ मद्दतको लागि छौं! यदि तपाईंको अर्डरको साथ कुनै मुद्दा छ भने टिकट पेश गर्न नि: शुल्क महसुस गर्नुहोस्!
30 डे रिटर्न वारंटी
Customers can contact us within 30 days of receiving the item. If you have receivedadefective or damaged item, the wrong size or the wrong product, please contact us immediately हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
हामीलाई कसरी पुग्न
हाम्रो जानुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस page and describe the issue in detail, including the return reason, along with your order number and SKU product number. For defective, incorrect or not as described item, please send usaclear picture or video of the problem.
1। प्रेमकोकिसको जिम्मेवारी:
यदि हाम्रो कम्पनी मुद्दाको लागि उत्तरदायी छ भने, हामी फिर्ती वा विनिमयको लागि हाम्रो गोदाममा फर्किनेछौं।
यदि ग्राहकले गलत साइज, उत्पादनको आदेश दिएको छ भने वा वस्तु वस्तु बदल्न चाहानुहुन्छ, हामी पनि फिर्ता गर्न सक्दछौं।
यस मामलामा, ग्राहकको लागि शिपिंग शुल्कको लागि जिम्मेवार हुनेछ (एक्सचेन्जको लागि र हाम्रो गोदामबाट)। यदि ग्राहकले फिर्ती चयन गर्दछ भने, हामी मूल उत्पादन मूल्य फिर्ता गर्नेछौं। सबै र कुनै पनि ढुवानी शुल्क गैर-फिर्ती योग्य छैन।
वारंटीको बारेमा थप टिप्पणीहरू
सबै फिर्तीहरू पहिला हाम्रो ग्राहक सेवा टोली द्वारा स्वीकृत हुनुपर्छ। यदि स्वीकृत भएमा, तपाईंलाई RMA फारमको साथ प्रदान गरिनेछ। RMA फारम बिना फर्काइएको वस्तुहरू स्वीकृत हुने छैन।
सबै फर्काइएका वस्तुहरू ब्रान्ड नयाँ शर्तमा हुनुपर्छ, अप्रयुक्त / अज्ञात, छुटेको, सबै वास्तविक ट्याग र उनीहरूका मूल प्याकेजिङमा आउनुहोस्।
यदि ग्राहकले फिर्ती अनुरोध गर्दछ भने, हामी फिर्ता वस्तु प्राप्त गर्दा मूल उत्पादन लागत फिर्ता गर्नेछौं। सबै शिपिंग शुल्क वस्तु फर्काउन, र मूल ढुवानी फीस, गैर-फिर्ती योग्य छैन।
हामी intimates, swimwear, अधोवस्त्र र सौन्दर्य वस्तुहरु, वा छुट वस्तुहरु मा रिटर्नहरू स्वीकार गर्दैनौं। जबसम्म ग्राहकले गलत वस्तु प्राप्त नगरेसम्म वा वस्तु खराब थियो।